युएईबाट नेपालीको प्रश्न– रेमिट्यान्सले देश चल्ने, हामी किन नचल्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
‘हाम्रो दुःख सरकारले देखेन’
९ भदौ, युएई । अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका घर भई दुवईको एक होटलमा काम गर्दै आएका टोपलाल खनाल ६ महिनादेखि स्वदेश फर्किने टिकटको पर्खाइमा थिए । आफैंले टिकट पाउन नसकेपछि कम्पनीले भदौ १ को टिकट काटिदिएको थियो ।
तर नेपाल सरकारले भदौ १५ सम्मका लागि सबै उडान स्थगन गर्ने जनाएपछि उनी जाने फ्लाइट क्यान्सिल भयो । अन्य जहाजमा महँगो रकममा टिकट पाइने जनाउँदै सस्तो मूल्यमा कम्पनीले नै टिकट काटिदिएको थियो ।
भदौ १ को टिकटमा घर जान नपाएएपछि अब उक्त टिकटको पैसा फिर्ता आउने–नआउने निश्चित नभएको र पुनः ःटिकटका लागि कम्पनीले सहयोग गर्ने हो कि होइन भन्ने चिन्ता टोपलाललाई छ ।
आफ्नै देश फर्कन विभिन्न बहानाबाजी गरिनु र शर्त राख्नु गलत भएको विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको गुनासो छ
खाडीका कतिपय देशमा ६ महिनादेखि काम ठप्प छ । केहीले आंशिक रुपमा काम गरिरहेका छन् । कतिपयले बन्दाबन्दीको समयमा कामबाट निस्कासन हुन परेको छ । कतिपय कम्पनीले तोकेको न्युन तलब सेवासुविधामा काम गरिहेका छन् । भिसा सकिएर ओभरस्टे भएकाहरुले महँगो जरिवाना तिर्दैछन् । तर सरकारले आफ्ना नागरिकको समस्या समाधानमा कुनै चासो दिएको देखिदैन ।
सरकारले समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकको उद्धारमा गरेको निर्णयप्रति खाडीमा कार्यरत कामदार खुसी छैनन् । युएईबाट मात्रै हालसम्म कोभिडका कारण विभिन्न समस्यामा परेका करिब १४ हजार जना नेपाली स्वदेश फर्किए । दूतावासले स्वदेश फर्कनेहरुका लागि आह्वान गरेका फारममा ४२ हजारले स्वदेश फर्कने जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय कम्पनी बन्द भएका कारण रोजगारी गुमाएकाहरु समेत थपिदा यो संख्या अझै धेरै हुन जान्छ । सुरुवातमा दूतावासले समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा पठायो । तर एकीकृत नामावली सार्वजनिक गरेर सम्बन्धित एयरलाइन्स मार्फत सम्पर्क गरेर जान भनियो ।
युएईमा कार्यरत कुमार श्रेष्ठको सरकारलाई प्रश्न छ– सात दिनसम्म होटल क्वारेन्टिनमा बस्नै पर्ने, होटलमा बसेको र घरसम्म पुग्दा लाग्ने खर्च आफैंले व्यहोर्न पर्ने विषयमा लिखित प्रतिवद्धता जनाउन नसक्नेहरु नेपाल आउन नपाउने ?
नेपाल सीमित व्यक्तिहरुको मात्र देश हो र ? के खाडीमा काम गर्ने मजदुर देशका नागरिक होइनन् ? खाडीवालाकै परिश्रमको रेमिट्यान्सले देश चल्ने, अहिले रेमिट्यान्स पठाउन नसक्दा खाडीमा कार्यरत नागरिक देशमा नचल्ने ?’ -अनलाईन खबर